Tweaks tsotra 13 hanovana sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka torohevitra vitsivitsy izahay manao touch-up fototra rehefa manova sary amin'ny Photoshop izahay. Zava-dehibe ny manamarika fa maro amin'ireo teknika ireo no mety manana fomba hafa anaovana azy, satria Photoshop Izy io dia programa misy fiasa be dia be ary ny zavatra mitovy amin'izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fisafidianana safidy isan-karazany.
Atorinay anao izao Fandraisana an-tanana 13 mora izay afaka manome valiny tsara kokoa amin'ny fanovana sary amin'ny Photoshop.
Ovay ny lokon'ny maso
Ho an'ity dia manamboatra sosona vaovao mandika izay ampahan'ny mason'ny sary tany am-boalohany isika. Apetrantsika eo amin'ny Mode WEFT, mahatonga ity sosona iray manontolo ity ho maivana kokoa noho ilay sosona nanan'ilay sary tany am-boalohany.
Satria ny iris ihany no tadiavinao, ny tokony hataonao dia mamorona sarontava mainty izay afaka manarona ny sosona iray manontolo ary avy eo mampiasa borosy miaraka amin'ny loko fotsy ampisehoantsika azy amin'ny ampahany amin'ny iris ihany.
Veloma maso mena
Raha mitranga izany dia mila manao asa roa ianao ary rehefa voamarika tsara ny lalan-drà dia tsy maintsy atao izany ataovy manjavona izy ireo mampiasa borosy fanasitranana. Ary raha mena loatra loatra ireo, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mamorona fanitsiana amin'ny saturation ary afaka manala an'io saturation io amin'ny mena.
Aorian'izany dia mihetsika miaraka amin'ny sarontava isika ary mamela ny faritra fotsy amin'ny masony foana, izay dia hahatonga ny loko mena hanjavona.
Fotsy ny nify
Tsy zavatra mety hitranga any amin'ny tobim-pitsaboana nify fotsiny izany, ny fikasihan-tanana koa afaka manafotsy ny nify ary noho izany dia mampiasa teknika izay noresahinay tamin'ny teboka teo aloha ihany izahay, fa apetaho amin'ny inona ny ampahan'ny nify, ka ny loko izay tsy maintsy esorintsika ny mahavoky dia mavo fa tsy mena.
Esory ny mony
Teknika somary tsotra ity, mila fotsiny ianao safidio ny ampahany amin'ny hoditra tsy manana mony ary apetaho amin'ilay iray anananao ary mazava ho azy fa ny fitaovana Photoshop no hikarakara ny ambiny.
Volo tsy misy toerana
Mba hanaovana izany dia mampiasa ny Fitaovana fanasitranana borosy toy ny tamin'ny teboka teo aloha, hahafahana manitsy ireo volo manelingelina izay matetika mahazo ny tarehy.
Ity fomba ity dia mampiasa a digitizer. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mamorona sosona vaovao eo an-tampon'ny sary ary amin'izany dia manoritra ny takelaka isika, ny fampiasana ny loko voajanahary avy amin'ny iray ihany.
Teknika taloha io Asongadino ireo fiasa an'ilay olona. Mba hanaovana izany dia averintsika ny sosona sary, avy eo esorintsika ny saturation, ampitahaina amin'ny fiolahana ary avy eo mandalo sivana avo lenta isika.
Farany, apetrakay amin'ny maody io sosona io fusion mihabetsaha.
Hatsarao ny tongotra
Amin'ny sary zazavavy ihany no anaovana izany matetika ary noho izany dia mifantina hatramin'ny andilana ka hatrany ambany sy mamorona sosona vaovao izahay ary mila mamelatra azy fotsiny isika mba hahazoana tongotra lava kokoa.
Manalefaka kitapo maso
Ny momba ny fakana ohatra ny sombin-koditra misy loko marevaka kokoa ary mametraka an'io loko io amin'ny faritra maizin'ny kitapo.
Ho an'ity ihany mifantina ny hoditra izahay ary mampiasa sarontava miaraka amin'ny loko fanamiana, hoy ny sosona apetraka amin'ny jiro malefaka ary avy eo manitsy ny opacity isika.
Fahazavana sy aloka
Izao no fantatro mamorona sosona miolakolaka ary tsy tokony ho voakitika ny fiolahana RGB, izay no voalohany ao an-tsaintsika. Izahay dia mandoko azy amin'ny loko ary manitsy ny fiolahana mba hahazo hazavana bebe kokoa na aloka bebe kokoa.
Vokatry ny Vintage
Mamorona tsipika vaovao fotsiny isika ary mamindra ny teboka farany.
Izahay dia mitady zavatra grunge, mandeha amin'ny mainty sy fotsy isika ary apetraho eo amin'ny sary izany. Izahay dia mamakivaky ny maody an-tampon'ny sosona ary mampidina ny opacity an'ilay sosona misy ilay endriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Touch-up mora 13 izay afaka manome valiny tsara kokoa amin'ny fanovana sary amin'ny Photoshop
Ireo mpanakanto nomerika mahafinaritra izay manaitra an'izao tontolo izao